Chibvumirano chenyika isina mhirizhonga - Nyika yaMarch
musha » Tsamba yenyika isina mhirizhonga
"Chibvumirano cheNyika Isina Mhirizhonga" mhedzisiro yemakore akati wandei ekushanda nevanhu nemasangano vakahwina Mubayiro weNobel Peace. Runyorwa rwekutanga rwakapihwa paSeventh Summit yeNobel Laureates muna 2006 uye vhezheni yekupedzisira yakatenderwa kuRusere Summit muna Zvita 2007 kuRome. Iwo poindi ekuona uye zvirevo zvakafanana kune izvo zvatinoona pano munaKurume.
I11 yaNovember ye2009, panguva yeTenth World Summit yakaitwa muBerlin, vanopinda Mutengo Worugare weNobel Vakaendesa Chinyorwa chenyika isina mhirizhonga kune vanokuridzira Nyika Inofananidzira Rugare uye Kusagadzikana Vachaita sevatumwa vebhuku racho sechikamu chekuedza kwavo kuwedzera kuziva kwepasi rose nezvechisimba. Silo, nheyo ye Universalist Humanism uye kufemerwa kweWorld March, vakataura nezve Zvinoreva Runyararo uye Kusagadzikana panguva iyoyo.
Chisimba chirwere chisingazivikanwi
Hakuna State kana wega munhu angave akachengeteka munyika isina kuchengeteka. Hunhu hwekusaita zvechisimba hwakarega kuve imwe nzira yekuita chinodiwa, mese mune zvinangwa, sekufunga nemabasa. Iyi tsika inoratidzwa mukushandiswa kwavo kune hukama huri pakati penyika, mapoka nevanhu. Tine chokwadi chekuti kuomerera kumisimboti yekusiri mhirizhonga kuchaunza runyararo uye runyararo runyararo rwenyika, umo irinokurumidza uye inobudirira hurumende inogona kuitika, inoremekedza chiremerera chevanhu uye hutsvene hwehupenyu pachahwo.
Tsika dzedu, nyaya zvedu uye hwedu hupenyu hwakabatana uye zvatinoita zvinoenderana. Nhasi zvisati zvamboitika, tinotenda kuti takatarisana nechokwadi: chedu chinhu chakajairika. Izvo zvinotemerwa zvichatemwa nezvishuvo zvedu, zvisarudzo zvedu uye zvatinoita nhasi.
Isu tinotenda zvakasimba kuti kusika tsika yorugare uye isiri chisimba ndicho chinangwa chakanaka uye chakakosha, kunyange kana chiri chirongwa chakareba uye chakaoma. Kusimbisa mitemo yakasarudzwa muChiratendi iyi danho rekukosha zvakakosha kusimbisa kuponesa nekusimudzirwa kwevanhu nekuwana nyika isina chisimba. Isu, vanhu nemasangano anopiwa neNobel Peace Prize,
Kusimbisa kuzvipira kwedu ku Universal Declaration of Human Rights,
Concerned nokuda kwekuda kwekugumisa kupararira kwechisimba kumativi ese evanhu uye, pamusoro pezvose, kune zvingangovhiringidza zvingangoita hupenyu hwevanhu;
Kusimbisa iyo rusununguko rwefungiro uye kutaura zvinokonzera demokrasi uye zvisikwa;
Kuziva kuti kurwisana kunozviratidza mumhando dzakasiyana-siyana, ngakuve sehondo yakagadzirirwa, basa remauto, urombo, kushandiswa mune zvemari, kuparadzwa kwezvakatipoteredza, uori uye kusarura kunobva mukurudzi, chitendero, zvepabonde kana zvepabonde;
Kugadzirisa kuti kukudzwa kwechisimba, sezvinoratidzwa kuburikidza nekutengeserana kwezorodhi, kunogona kuita kuti kugamuchirwa kwechisimba kuve chinhu chinowanzoitika uye chinogamuchirwa;
Kugutsikana kuti avo vanobatwa nechisimba ndivo vasina simba uye vanotambura zvikuru;
Kufunga nezvazvo kuti rugare harisi kungovapo kwechisimba chete asiwo kuvapo kwehutongi uye hupenyu hwevanhu;
Kufunga kuti kusaziva kwakakwana kukasiyana-siyana kwemadzinza, tsika uye zvechitendero kune chikamu cheAmerica ndiko kunokonzera zvakawanda zvechisimba chiripo munyika;
Kuziva kukurumidza kwekugadzira imwe nzira yekuchengetedza pamwe chete kwakavakirwa pachimiro chisina nyika, kana boka renyika, rinofanirwa kuve nezvombo zvenyukireya nekuchengetedza kwarwo;
Kuziva kuti nyika inoda nzira dzakakwana dzenyika yose uye dzisiri dzechisimba zvekudzivirira kupesana nekugadziriswa, uye kuti idzi dzinobudirira zvikuru kana dzichigamuchirwa panguva yepamusoro pakukwanisa;
Kutsigira kuti avo vane masimba emasimba vave nebasa guru rekugumisa kurwisana, pose painozviratidza, nekudzivirira iyo chero zvichibvira;
Kugutsikana kuti nheyo dzisiri dzechisimba dzinofanira kukunda kumativi ose evanhu, pamwe chete nehukama huri pakati peMunhu nevamwe;
Tinoshevedza vanhu vemunyika dzakawanda kuti vafarire kufambiswa kwemashoko anotevera:
Munyika inopindirana, kudzivirirwa uye kupera kwemakakatanwa ehondo pakati peNyika uye mukati mematongerwo enyika zvinoda kushanda pamwe chete kune chikamu chenyika dzakawanda. Nzira yakanakisisa yekuvimbisa kuchengeteka kwehumwe hurumende ndeyekusimudzira kuchengetedzwa kwenyika yose. Izvi zvinoda kusimbisa kukwanisa kwekushandisa kwehutungamiri hweUN uye yehutano hwekushandira pamwe.
Kuti uwane nyika isina chisimba, Nyika inofanira kugara ichiremekedza mutemo wemutemo uye inokudza mazano avo emutemo.
Zvakakosha kupfuurira kunze kwekuwedzereka kunonoka kune kuoneka kubviswa kwezvombo zvenyukireya uye zvimwe zvombo zvekuparadza kwakawanda. Inyika iyo inobata zvombo zvakadaro inofanira kutora matanho chaiwo ekudzivirira kusagadzikana uye kugamuchira zvidziviriro zvisingateereri kugadzirisa zvombo zvenyukireya. Panguva imwecheteyo, Nyika inofanira kuedza kusimbisa hurumende isina huwandu hwehurumende, uye ichisimbisa kutenderera kwenyika dzakawanda, kuchengetedza zvinhu zvenyukireya nekuita zvombo zvehondo.
Kuti kuderedze chisimba munharaunda, kubudisa uye kutengeswa kwezvombo zviduku uye zvombo zvishoma zvinofanira kuderedzwa uye zvakanyatsodzivirirwa kune dzimwe nyika, nyika, mahara uye mahara. Mukuwedzera, panofanira kunge kune kushandiswa kwepasi rese uye zvibvumirano zvenyika dzakawanda pamusoro pekuregererwa kwezvombo, zvakadai seChipatara cheMigodhi cheMigodhi yeChina, uye kutsigirwa kwemashoko matsva anoitirwa kubvisa kukanganisa kwezvombo zvisingasaruri uye zvinoshandiswa ne vanotambudzwa, zvakadai semasimba emasumbu.
Ugandanga hahukwanisi kururamiswa, nokuti chisimba chinoita chisimba uye nokuti hapana chiito chokutya pamusoro pevanhu vasina ruzivo chero nyika ipi zvingaitwa muzita rechikonzero chipi zvacho. Hondo yekurwisana nehugandanga haikwanisi, asi, inokonzera kukanganisa kwekodzero dzevanhu, mutemo wenyika yose wevanhu, mitemo yemasangano ehurumende uye democracy.
Kupedza mhirizhonga yemudzimba neyemhuri kunoda kuremekedzwa zvisina mwero kuenzana, rusununguko, chiremerera nekodzero dzemadzimai, varume nevana, kune vanhu vese nemasangano eHurumende, chitendero ne veruzhinji. Kuchengetedza kwakadai kunofanirwa kuve kunowanikwa mumitemo yemuno neyekunze nemagungano.
Munhu mumwe nomumwe neHurumende vane chikamu chekudzivirira chisimba chevana nevechidiki, avo vanomiririra ramangwana redu pamwe chete nemari yedu inokosha, uye kukurudzira mikana yezvidzidzo, kubatsirwa kwehutano hwehutano, kuchengetedzwa kwevanhu, kuchengetedzwa kwevanhu uye nzvimbo inotsigira iyo inosimbisa kwete isimba se nzira yehupenyu. Dzidzo murugare, iyo inokurudzira kusava nechisimba uye kusimbiswa kunzwira sehunhu hunozvarwa hwevanhu hunofanirwa kuva chikamu chinokosha chezvirongwa zvekudzidzisa kumativi ese.
Kuchengetedza kukakavadzana kunobva mukuderera kwezvisikwa zvepanyika uye, kunyanya, mvura uye magetsi, zvinoda States kuti dzigadzirise basa rinoita uye dzigadzire mitemo yepamutemo uye mienzaniso yakatsaurirwa kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kukurudzira kusungirirwa kwe kushandiswa kwaro zvichienderana nekuwanikwa kwezvinhu uye zvinodiwa nevanhu
Tinodana kuUnited Nations uye nhengo yayo inotarisira kukurudzira kubvumirana kunobatsira kwehutsika, tsika uye zvechitendero. Mutemo wegoridhe wepasi risina hutsinye ndehwekuti: "Tora vamwe sezvaunoda kurapwa."
Izvo zviito zvezvematongerwe enyika zvakakosha kuumba nyika isiri yechisimba ndeyekuti hutungamiri huri hurumende huripo uye hukurukuro hunobva pachiremera, ruzivo nekuzvipira, kunoitwa maererano nekuyera pakati pemapoka, uye, kana zvakakodzera, uyewo inofunga mupfungwa zvikamu zvehupenyu hwevanhu semunhu wose uye nzvimbo yakasikwa iyo inorarama.
Vose Hurumende, masangano nemunhu mumwe nomumwe vanofanira kutsigira miitiro yekukunda kukanganisa mukupararira kwezvigadzirwa zvezvemari uye kugadzirisa kusaenzana kukuru kunoita kuti ivhu rive rakaorera zvechisimba. Kuvhiringidzwa kwehupenyu huripo kunotungamirira kushayikidzwa kwemikana uye, muzviitiko zvakawanda, pakurasika kwetariro.
Sangano revanhu, kusanganisira vadziviriri vekodzero dzevanhu, varwi ve pacifist uye vatsigiri vezvakatipoteredza, vanofanira kuonekwa nekuchengetedzwa sezvakakosha pakuvakwa kwenyika isiri ine chisimba, sezvo hurumende dzose dzinofanira kushumira ivo vagari vemo uye kwete zvakatarisana. Mamiriro ezvinhu anofanira kusikwa kubvumira uye kukurudzira kubatanidzwa kwemasangano ehurumende, kunyanya vakadzi, mune zvematongerwe enyika pane zvenyika, mahara, nyika uye mahara.
Mukuisa masheti eChiratidziro ichi, tinotendeukira kune isu tese kuti tishande pamwe chete nyika ine humhondi uye inouraya, mune munhu wese ane kodzero yekusaurayiwa uye, panguva imwecheteyo, basa rekusauraya kune chero munhu
Masiginecha eChitenderano chenyika isina mhirizhonga
Para kugadzirisa mhando dzose dzechisimba, tinokurudzira kutsvakurudza kwesayenzi munharaunda yekubatana kwevanhu uye kukurukurirana, uye tinokoka masangano, zvesayenzi uye zvechitendero kuti atibatsire pakuchinja kune vevanhu vasiri vechisimba uye vasina kuuraya. Isa Ichi Charter yeNyika isina Chisimba
Hutsvene hwake Dalai Lama
American Friends Friends Service Committee
International Office of Peace
Kanzuru yeCagliari, Italy
Cagliari Province, Italy
Guta reVilla Verde (OR), Italy
Ruwa rweGrosseto, Italy
Dunhu reLesignano de 'Bagni (PR), Italy
Kanzuru yeBagno a Ripoli (FI), Italy
Kanzuru yeCastel Bolognese (RA), Italy
Guta reCava Manara (PV), Italy
Guta reFaenza (RA), Italy
Runyararo Vanhu, Belfast, Northern Ireland
Association Memory Collettiva, Sangano
Nyika isina hondo uye pasina mhirizhonga
World Center for Humanist Studies (CMEH)
Mutemo (nokuda kwekusimudzira vanhu), World Federation
Kutendeuka kweZvibodzwa, World Federation
International Federation of Humanist Parties
Sangano "Cádiz Yevasina-Mhirizhonga", Spain
Vakadzi for Shanduko International Foundation, (United Kingdom, India, Israel, Cameroon, Nigeria)
Sangano reRunyararo uye Zvidzidzo zveSecurity, Pakistan
Sangano Assocodecha, Mozambique
Awaz Foundation, Center for Development Services, Pakistan
Euraf Africa, Multicultural Association, France
Runyararo Mitambo UISP, Italy
Moebius Club, Argentina
Centro pa lo sviluppo yekusika "Danilo Dolci", Italy
Centro Studi ed European Initiative, Italy
Gruppo Emergency Alto Casertano, Italy
Bolivian Origami Society, Bolivia
Il sentiero del Dharma, Italy
Gocce di fraternità, Italy
Aguaclara Foundation, Venezuela
Associazione Lodisolidale, Italy
Dzidzo Yekodzero Dzevanhu uye Active Kurwisana Kudzivirira Kokorodzi, Spain
ETOILE.COM (Agence Rwandaise d'Edition, de Recherche, de Presse et de Kutaurirana), Rwanda
Sangano reHuman rights Youth Organisation, Italy
Athenaeum yePetare, Venezuela
Ethical Association yeCÉGEP yeSherbrooke, Quebec, Canada
Federation of Yakasarudzika Institutions yeVana, Vechidiki uye Mhuri Kutarisira (FIPAN), Venezuela
Center Communautaire Jeunesse Unie de Parc Yakawedzera, Québec, Canada
Varapi veGlobal Kupona, Canada
UMOVE (Vanamai VeUnited Vanopokana Mhirizhonga Kwese Kwese), Canada
Kuchova Grannies, Canada
Transformative Kudzidza Center, University of Toronto, Canada
Vatsigiri veRunyararo uye Vasina Rutano, Spain
ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), Italy
Legautonomie Veneto, Italy
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Italy
UISP Lega Nazionale Attività Subacquee, Italy
Commissione Giustizia e Pace di CGP-CIMI, Italy
Mr. Walter Veltroni, Aimbove Meya weRome, Italy
VaTadatoshi Akiba, Mutungamiriri weMameya eRunyararo uye Meya weHiroshima
Mr. Agazio Loiero, Gavhuna weCalabria Dunhu, Italy
Prof. Sw Swathanathan, Aimbova Mutungamiriri wePugwash Conason paSainzi neNhau dzeNyika, Nobel Peace Prize Organisation
Jonathan Granoff, Mutungamiriri weGlobal Security Institute
George Clooney, mutambi
Don Cheadle, mutambi
Bob Geldof, muimbi
Tomás Hirsch, mutauri weHumanism weLatin America
Michel Ussene, mutauri waHumanism Africa
Giorgio Schultze, mutauri waHumanism weEurope
Chris Wells, Mutauri weHumanism yekuNorth America
Sudhir Gandotra, mutauri waHumanism weAsia-Pacific Region
Maria Luisa Chiofalo, Advisor kuManare Pisa, Italy
Silvia Amodeo, Mutungamiri weMeridion Foundation, Argentina
Miloud Rezzouki, Mutungamiri we AODEC Association, Morocoa
Angela Fioroni, Secretary of Legautonomie Lombardia, Italy
Luis Gutiérrez Esparza, Mutungamiri weLatin American Circle yeInternational Study (LACIS), Mexico
Vittorio Agnoletto, aimbova nhengo yeParamende yeEuropean, Italy
Lorenzo Guzzeloni, Meya weNovate Milanese (MI), Italy
Mohammad Zia-ur-Rehman, National Coordinator weGCAP-Pakistan
Raffaele Cortesi, Meya weLugo (RA), Italy
Rodrigo Carazo, Aimbova Mutungamiriri weCosta Rica
Lucia Bursi, Meya weMaranello (MO), Italy
Miloslav Vlček, Mutungamiriri weChamber of Depadors yeCzech Republic
Simone Gamberini, Meya weCasalecchio di Reno (BO), Italy
Lella Costa, Actress, Italy
Luisa Morgantini, aimbova Mumiriri-Mutungamiriri weParamende yeEuropean, Italy
Birgitta Jónsdóttir, nhengo yeImba yeParadhiso, Mutungamiri weShamwari dzeTibet muItari
Timóteo, João Antonio, Juliana Cardoso Alfredinho Penna ("Paramende Pamberi Pokufambidzana kwePasi Pose Runyararo neNão Violência muSão Paulo"), Brazil
Katrín Jakobsdóttir, Gurukota reDzidzo, Tsika neSainzi, Iceland
Loredana Ferrara, Advisor weProvince yePrato, Italy
Ali Abu Awwad, Runyararo muratidziri kuburikidza nonviolence, Palestine
Giovanni Giuliari, Advisor kuna Akare Vicenza, Italy
Rémy Pagani, Meya weGeneva, Switzerland
Paolo Cecconi, Meya weVernio (PO), Italy
Viviana Pozzebon, muimbi, Argentina
Max Delupi, mutori wenhau uye mutyairi, Argentina
Páva Zsolt, Meya wePécs, Hungary
György Gemesi, Meya weGödöllő, Mutungamiri weMatunhu Enyika, Hungary
Agust Einarsson, mutungamiriri weYunivhesiti yeBifröst University, Iceland
Svandís Svavarsdóttir, Gurukota rezvemamiriro ekunze, Iceland
Sigmundur Ernir Rúnarsson, nhengo yeParamende, Iceland
Margrét Tryggvadóttir, nhengo yeParamende, Iceland
Vigdís Hauksdóttir, nhengo yeParamende, Iceland
Anna Pála Sverrisdóttir, nhengo yeParamende, Iceland
Thráinn Bertelsson, nhengo yeParamende, Iceland
Sigurður Ingi Jóhannesson, nhengo yeParamende, Iceland
Omar Mar Jonsson, Meya weSudavikurhreppur, Iceland
Raul Sanchez, Secretary of Human Rights yeProvince yeCordoba, Argentina
Emiliano Zerbini, Muimbi, Argentina
Amalia Maffeis, Servas - Cordoba, Argentina
Almut Schmidt, Director Goethe Institut, Cordoba, Argentina
Asmundur Fridriksson, Meya weGardur, Iceland
Ingibjorg Eyfell, Mutungamiriri weChikoro, Geislabaugur, Reykjavik, Iceland
Audur Hrolfsdottir, Mutungamiriri weChikoro, Engidalsskoli, Hafnarfjordur, Iceland
Andrea Olivero, Mutungamiriri weNyika weAcli, Italy
Dennis J. Kucinich, nhengo yeCongress, USA